HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraQolalka Daryeelka Ilmaha ayaa laga furay Saldhigyada Magaalada Ankara
29 / 11 / 2019 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Metro, TURKEY
qolalka daryeelka ilmaha ayaa laga furay xarumaha metrooga ee ankara
Iyada oo la tixgalinayo baahida iyo rabitaanka muwaadiniinta magaalada caasimada ah, Dowlada Hoose ee Magaalada Ankara waxay sii waddaa adeegyadeeda si ay u fududeyso nolosha hooyooyinka.
Qolka Daryeelka Ilmaha iyo Naasnuujinta ”ee Bakım” ayaa laga furay Kızılay, Keçiören, Sincan iyo Batıkent Metro Stations markii uu amar ku bixiyay Duqa Magaalada Ankara Mansur Yavaş.
Helitaanka baarista haweenka
Codsiga siinaya raaxo weyn hooyooyinka ku dhibtooday helitaanka meel ay ku beddelaan ama naasnuujiya carruurtooda waxay ka helaan calaamado buuxa dadka ka shaqeeya maal-gashadayaasha.
Dowladda Hoose ee Magaaladu waxay u furtay qolalka daryeelka ilmaha iyo qolalka naasnuujinta hooyooyinka si ay u daryeelaan carruurtooda xilliyadooda gaarka ah iyo xaaladaha degdegga ah oo ay soo jiidasho weyn ka helaan hooyooyinka iyo xitaa ayeeyooyinka.
XARUNTA DARYEELKA BABY EE 06.00-01.00
Awoodda rakaabka maalinlaha ah ee 450 kun ee qof ee soo marta wadada tareenka, gaar ahaan hooyooyinku waxay waqti la qaadan karaan ilmahooda qol gaar ah oo looga baahan yahay Duqa Magaalada Ankara Mansur Yavaş, wuxuu sidoo kale faray in la kordhiyo tiradan.
Marxaladda koowaad, Xarumaha Daryeelka Ilmaha iyo Naasnuujinta ayaa laga furay Kızılay, Keçiören, Sincan iyo Batıkent Metro Stations waxaa loo diyaariyey hooyooyinka inta u dhexeysa saacadaha 06.00-01.00.
Qolalka Daryeelka Ilmaha iyo Naasnuujinta, oo ay ku ixtiraamaan labada hooyooyin ee adeegsada tareenka dhulka hoostiisa ah inta lagu guda jiro safarradooda iyo hooyooyinka u yimid caasimada sidii martida, waxay sidoo kale leeyihiin raaxo ay ku daboolaan baahiyo badan oo ka imanaya shukumaannada gacanta iyo kuraasta fadhiga, miisaska carruurta si weelka qashinka loo dhigo.
HOOYOOYINKA IYO KHUDBADAHA WAA SATISFIED
Hooyooyinka iyo ayeeyooyinka, kuwaas oo u mahadceliyay Madaxweyne Yavaş iyo kuwa ku soo biiriyay, waxay fikradooda la wadaageen ereyadan:
-Nermin Onder (54): olmuş Waa mid aad u qurux badan. Waxaan haystaa ilmahayga 2. Waxaan bilownay inaan isticmaalno qolalkaas markii ay dhallaanka u baahan yihiin inta ay aadayaan dhulka hoostiisa. Waxaan u mahadcelineynaa kuwa gacan ka gaystay. ”
-Hatice Kılıç (23): durumunda Waxay ahayd raaxo aad u weyn marka la eego naasnuujinta iyo bedelka ilmaha. Waxaan rajeyneynaa inay ku jiraan marinnada dhulka hoostiisa oo dhan. Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo Dawladda Hoose ee Magaaladda. ”
-Yaş Peşmen (40): çok Codsi aad u fiican ayaa loogu talagalay hooyooyinka leh carruurta. Ilmuhu si lama filaan ah ayuu gaajoonayaa, saxaro u dirayaa, ma cadda goorta. Waxay ahayd dhaqan aad u wanaagsan tan. Waxaan jeclaan lahayn inaan u mahadcelinno Duqa Magaalada Mansur Yavaş Büyük
-Semiha Doğru (43): “Hooyooyinku waxay la dhibaatoonayaan naasnuujinta. Waxay ahayd dhaqan wanaagsan. Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo Dawladda Hoose ee Magaaladda. ”
Ku dhawaaqida qandaraaska: 2 Dayactirka qolalka kala duwan ee dhismaha agaasinka heer gobol iyo ve
Ilmaha dhaadhicinta jidka tareenka
Ogeysiiska Qandaraaska: M4 Shaqaalaha Kadikoy Kartal Qeybta Qolalka Cusub ee Cusboonaysiinta
Ogeysiiska Soo iibsiga: Daraasad elektiroonig ah oo xafiisyada xafiisyada boostada farsamada ee Behiçbey…
Ogeysiinta Ugaarsiga: N nasashada shaqaalaha inta u dhaxaysa M4 Line Kadıköy-Bostancı xarumaha…
Cunuggu wuxuu daryeeli karaa geedaha marinka taraamka
Qolalka Daryeelka Ilmaha ee Saldhigyada Ankara
Qolalka Daryeelka Ilmaha
Qolalka Daryeelka Ilmaha iyo Naasnuujinta